ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် မသုံးသင့်သည့် စကားများ – Gentleman Magazine
ပွောဆိုဆကျဆံရာတှငျ မသုံးသငျ့သညျ့ စကားမြား
ကျွန်တော်တို့အများစုက တဖက်သူကို နားလည်မှုလွဲသွားစေနိုင်မယ့် စကားတွေကို ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိမထားမိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်က တစ်ဖက်သူရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ Social Awareness ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ စိတ်ခံစားသိမှတ်မှုစွမ်းရည် (Emotional Intelligence)ကို လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ရာမှာ အများစုဟာ Social Awareness မရှိတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Social Awareness မရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားက တဖက်သားကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာကို မတွေးနိုင်ပဲ နောက်ထပ် ဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် Social awareness တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက် သင်စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာ အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်ပြုပြင်လိုက်ရုံနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် EQ ကောင်းပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးအောင်မြင်သူတွေ ပြောလေ့ပြောထမရှိတဲ့ စကားတွေကို စုစည်းထားပါတယ်။ ဒီစကားတွေကို သတိထားပြီး မပြောမိအောင် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
၁။ မင်း ပင်ပန်းနေပုံရတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသူတွေက ရင်ထဲမှာ ပန်းတွေပွင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်တွင်းတွေကျ၊ ဆံပင်တွေ ဖွာလန်ကျဲပြီး အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနည်းနေတတ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနေသူတွေက ပြောချင်ဆိုချင်စိတ် နည်းနေတတ်သလို အားလုံးကို ကျွဲမြီးတို အလိုမကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို သွားပြီး ပင်ပန်းနေပုံပဲလို့ ပြောလိုက်တာက အပေါ်ကပြောခဲ့တာတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ သွယ်ဝိုက်ပြောလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီလိုပြောမယ့်အစား အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ မေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အတွက် သူ့ကို ဂရုစိုက်ရာရောက်ပြီး ဝေမျှခံစားပေးလိုကြောင်း ဖော်ပြသလိုဖြစ်စေပါတယ်။
၂။ ၀ိုး.. မင်း အတော်ကို ပိန်သွားတာပဲ
ဒီလိုပြောတာက အခန့်မသင့်ရင် တစ်ဖက်သူက ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ဖြိုးနေတုန်းက လှပြီး အခုကျတော့ ဆွဲဆောင်မှု မရှိတော့သလို ခံစားသွားရစေပါတယ်။ ဒီလိုပြောမယ့်အစား မင်း လန်းနေပါလား လို့ သုံးပါ။ ဒါဆိုရင် အရင်က ပုံစံနဲ့ အခုပုံစံကို နှိုင်းယှဉ်သလိုလည်း မဖြစ်သလို ကြည့်ကောင်းနေကြောင်း ချီးကျူးရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
၃။ မင်းက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူမအတွက် ကောင်းလွန်းပါတယ်
ချစ်သူစုံတွဲတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို ဒီလိုသွားပြောလိုက်ရင် တစ်ဖက်သူအတွက် အရွေးမှားခဲ့သလိုကြီး ခံစားသွားရစေပါတယ်။ ဒီလိုပြောမယ့်အစား မင်းကို ကြွေသွားတာနေမှာပေါ့ လို့ ပြောတာက အပြုသဘောနဲ့ လိုက်ဖက်ကြောင်းထောက်ခံလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အမြဲတမ်း…. (သို့) ဘယ်တော့မှ…
ဘယ်သူကမှ ကိစ္စတစ်ခုကို အမြဲတမ်းလုပ်နေတာ၊ ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူတွေကို ပုံသေတွက်ထားလို့ မရပါဘူး။ အမြဲတမ်းတို့၊ ဘယ်တော့မှ တို့လို စကားလုံးတွေ သုံးပြီးပြောမယ်ဆိုရင် လူတွေကို စိတ်ပျက်စေပြီး သင်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ဖက်သားရဲ့ ဘယ်လိုအပြုအမူမျိုးက ပြဿနာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို ချက်ကျလက်ကျထောက်ပြတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီကြားထဲကမှ ဆက်လုပ်နေသေးရင် မင်းဒီလို ခဏခဏလုပ်နေသလိုပဲနော် (ဒါမှမဟုတ်) မင်း လုပ်လွန်းလို့ ငါတောင် မှတ်မိနေပြီဆိုတာမျိုးလေး ပြောပြီး သတိပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ မင်းအသက်အရွယ်နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်
မင်းအရွယ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားက သုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှ တခြားရွယ်တူတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ခိုင်းနှိုင်း ပြောတာမျိုကို မနှစ်သက်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မင်း ကြည့်ကောင်းနေတယ် ဆိုတာလောက်နဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။
၆။ ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ …….
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက အချိန်နဲ့အမျှ မေ့တတ်လျော့တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအတွက် အစပြန်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲဆိုပြီး ပြန်ပြောတာက သင့်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေသူတွေကို မလေးစားရာရောက်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောမယ့်အစား နောက်တစ်ခါပြန်ပြောဖို့အကြောင်းရှိလာရင် ပိုပြီးတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ပြောကြည့်ပါ။
ဒီစကားက အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးထွက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်မတတ်ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ရင် တစ်ယောက်ယောက်ကို ကံကောင်းပါစေလို့ မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောတာက သူတို့ကံကောင်းမှပဲ အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ ပြောလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီအစား မင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်လို့ ပြောပါ။ ဒီစကားက ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်ပေးတာထက် ပိုကောင်းပြီး တစ်ဖက်သူကို အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ယုံကြည်မှုတွေ တိုးပွားစေပါတယ်။
၈။ ဒါက မင်းအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ မင်းသဘောပဲ လုပ်ချင်တာလုပ်
သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ အကြံဉာဏ်ကို တောင်းလာတာကို ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင် မသင့်တော်ပါဘူး။ ငါလည်း ဘယ်လိုပြောပေးရမှန်း မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းစဉ်းစားကြည့်သင့်တာတွေက ဆိုပြီး အကောင်းအဆိုးကို ဆင်ခြင်ပြတာက အကြံဉာဏ်တောင်းလာသူကို ဂရုစိုက်ကြောင်း ဖော်ပြရာရောက်ပါတယ်။
၉။ ကောင်းပြီလေ၊ အနည်းဆုံးတော့ ငါ ……
ဒီလိုစကားခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကို ပေါ့အောင် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီစကားက ကိုယ့်အပြစ်အတွက် တခြားသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး တစ်ဖက်သူလောက်မဆိုးပါဘူးလို့ ထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာထက် ငါ တောင်းပန်ပါတယ်။ ငါ့အမှားပါလို့ ၀န်ခံလိုက်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ကို ၀န်ခံတာက နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့အမြားစုက တဖကျသူကို နားလညျမှုလှဲသှားစနေိုငျမယျ့ စကားတှကေို ပွောမိတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရတာဟာ ကြှနျတျောတို့ပွောလိုကျတဲ့စကားရဲ့ နောကျဆကျတှဲအကြိုးသကျရောကျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သတိမထားမိလို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအကြိုးသကျရောကျမှုတှကေို နားလညျနိုငျဖို့အတှကျက တဈဖကျသူရဲ့ စိတျခံစားမှုနဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ခနျ့မှနျးနိုငျတဲ့ Social Awareness ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ လူသနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ စိတျခံစားသိမှတျမှုစှမျးရညျ (Emotional Intelligence)ကို လလေ့ာစမျးသပျခဲ့ရာမှာ အမြားစုဟာ Social Awareness မရှိတာကို တှခေဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Social Awareness မရှိတဲ့အတှကျ ကိုယျပွောလိုကျတဲ့စကားက တဖကျသားကို ဘယျလိုသကျရောကျမှုရှိမလဲဆိုတာကို မတှေးနိုငျပဲ နောကျထပျ ဘာဆကျပွောရမလဲဆိုတာကိုပဲ စဉျးစားနတေတျကွပါတယျ။ ဒီလိုမဖွဈအောငျ Social awareness တိုးတကျကောငျးမှနျလာဖို့အတှကျ သငျစကားပွောဆိုတဲ့အခါမှာ အနညျးငယျထိနျးခြုပျပွုပွငျလိုကျရုံနဲ့ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ EQ ကောငျးပွီး လူမှုဆကျဆံရေးအောငျမွငျသူတှေ ပွောလပွေ့ောထမရှိတဲ့ စကားတှကေို စုစညျးထားပါတယျ။ ဒီစကားတှကေို သတိထားပွီး မပွောမိအောငျ ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ။
၁။ မငျး ပငျပနျးနပေုံရတယျ။
ပငျပနျးနှမျးနယျနသေူတှကေ ရငျထဲမှာ ပနျးတှပှေငျ့နတောမဟုတျပါဘူး။ မကျြတှငျးတှကြေ၊ ဆံပငျတှေ ဖှာလနျကြဲပွီး အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးနညျးနတေတျပါတယျ။ ပငျပနျးနသေူတှကေ ပွောခငျြဆိုခငျြစိတျ နညျးနတေတျသလို အားလုံးကို ကြှဲမွီးတို အလိုမကဖြွဈနတေတျပါတယျ။ တဈယောကျယောကျကို သှားပွီး ပငျပနျးနပေုံပဲလို့ ပွောလိုကျတာက အပျေါကပွောခဲ့တာတှေ ဖွဈနတေယျလို့ သှယျဝိုကျပွောလိုကျသလိုပါပဲ။ ဒီလိုပွောမယျ့အစား အဆငျပွရေဲ့လားလို့ မေးသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုမေးလိုကျတဲ့အတှကျ သူ့ကို ဂရုစိုကျရာရောကျပွီး ဝမြှေခံစားပေးလိုကွောငျး ဖျောပွသလိုဖွဈစပေါတယျ။
၂။ ဝိုး.. မငျး အတျောကို ပိနျသှားတာပဲ
ဒီလိုပွောတာက အခနျ့မသငျ့ရငျ တဈဖကျသူက ခန်ဓာကိုယျပွညျ့ဖွိုးနတေုနျးက လှပွီး အခုကတြော့ ဆှဲဆောငျမှု မရှိတော့သလို ခံစားသှားရစပေါတယျ။ ဒီလိုပွောမယျ့အစား မငျး လနျးနပေါလား လို့ သုံးပါ။ ဒါဆိုရငျ အရငျက ပုံစံနဲ့ အခုပုံစံကို နှိုငျးယှဉျသလိုလညျး မဖွဈသလို ကွညျ့ကောငျးနကွေောငျး ခြီးကြူးရာလညျး ရောကျပါတယျ။
၃။ မငျးက ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ သူမအတှကျ ကောငျးလှနျးပါတယျ
ခဈြသူစုံတှဲတှထေဲက တဈယောကျယောကျကို ဒီလိုသှားပွောလိုကျရငျ တဈဖကျသူအတှကျ အရှေးမှားခဲ့သလိုကွီး ခံစားသှားရစပေါတယျ။ ဒီလိုပွောမယျ့အစား မငျးကို ကွှသှေားတာနမှောပေါ့ လို့ ပွောတာက အပွုသဘောနဲ့ လိုကျဖကျကွောငျးထောကျခံလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ အမွဲတမျး…. (သို့) ဘယျတော့မှ…
ဘယျသူကမှ ကိစ်စတဈခုကို အမွဲတမျးလုပျနတော၊ ဘယျတော့မှမလုပျဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူတှကေို ပုံသတှေကျထားလို့ မရပါဘူး။ အမွဲတမျးတို့၊ ဘယျတော့မှ တို့လို စကားလုံးတှေ သုံးပွီးပွောမယျဆိုရငျ လူတှကေို စိတျပကျြစပွေီး သငျပွောခငျြတဲ့အကွောငျးအရာကို လကျခံမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ တဈဖကျသားရဲ့ ဘယျလိုအပွုအမူမြိုးက ပွဿနာဖွဈနတေယျ ဆိုတာကို ခကျြကလြကျကထြောကျပွတတျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီကွားထဲကမှ ဆကျလုပျနသေေးရငျ မငျးဒီလို ခဏခဏလုပျနသေလိုပဲနျော (ဒါမှမဟုတျ) မငျး လုပျလှနျးလို့ ငါတောငျ မှတျမိနပွေီဆိုတာမြိုးလေး ပွောပွီး သတိပေးနိုငျပါတယျ။
၅။ မငျးအသကျအရှယျနဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးတယျ
မငျးအရှယျနဲ့ဆိုတဲ့စကားက သုံးဖို့ မသငျ့တျောပါဘူး။ ဘယျသူကမှ တခွားရှယျတူတဈစုံတဈယောကျနဲ့ ခိုငျးနှိုငျး ပွောတာမြိုကို မနှဈသကျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ မငျး ကွညျ့ကောငျးနတေယျ ဆိုတာလောကျနဲ့တငျ လုံလောကျပါတယျ။
၆။ ခုနက ပွောခဲ့သလိုပဲ …….
ကြှနျတျောတို့အားလုံးက အခြိနျနဲ့အမြှ မတေ့တျလြော့တတျကွပါတယျ။ ဒီအတှကျ အစပွနျဖျောတဲ့အနနေဲ့ ခုနက ပွောခဲ့သလိုပဲဆိုပွီး ပွနျပွောတာက သငျ့ကို စိတျဝငျတစားနဲ့နားထောငျနသေူတှကေို မလေးစားရာရောကျပါတယျ။ ဒီလိုပွောမယျ့အစား နောကျတဈခါပွနျပွောဖို့အကွောငျးရှိလာရငျ ပိုပွီးတော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးနဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးအောငျ ပွောကွညျ့ပါ။
ဒီစကားက အဓိပ်ပါယျတှေ အမြားကွီးထှကျပါတယျ။ ကမ်ဘာပကျြမတတျဖွဈနတောမြိုးမဟုတျရငျ တဈယောကျယောကျကို ကံကောငျးပါစလေို့ မပွောသငျ့ပါဘူး။ ဒီလိုပွောတာက သူတို့ကံကောငျးမှပဲ အောငျမွငျနိုငျမယျလို့ ပွောလိုကျသလိုပါပဲ။ ဒီအစား မငျးလုပျနိုငျမယျဆိုတာ ငါသိတယျလို့ ပွောပါ။ ဒီစကားက ကံကောငျးပါစလေို့ ဆုတောငျပေးတာထကျ ပိုကောငျးပွီး တဈဖကျသူကို အောငျအောငျမွငျမွငျလုပျဆောငျနိုငျစဖေို့ ယုံကွညျမှုတှေ တိုးပှားစပေါတယျ။
၈။ ဒါက မငျးအပျေါမှာ မူတညျတယျ။ မငျးသဘောပဲ လုပျခငျြတာလုပျ
သငျ့ရဲ့ ထငျမွငျယူဆခကျြ၊ အကွံဉာဏျကို တောငျးလာတာကို ဒီလိုပွောမယျဆိုရငျ မသငျ့တျောပါဘူး။ ငါလညျး ဘယျလိုပွောပေးရမှနျး မသိဘူး။ ဒါပမေယျ့ မငျးစဉျးစားကွညျ့သငျ့တာတှကေ ဆိုပွီး အကောငျးအဆိုးကို ဆငျခွငျပွတာက အကွံဉာဏျတောငျးလာသူကို ဂရုစိုကျကွောငျး ဖျောပွရာရောကျပါတယျ။
၉။ ကောငျးပွီလေ၊ အနညျးဆုံးတော့ ငါ ……
ဒီလိုစကားခံပွီး ကိုယျ့ရဲ့အပွဈကို ပေါ့အောငျ ပွောတတျကွပါတယျ။ ဒီစကားက ကိုယျ့အပွဈအတှကျ တခွားသူနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး တဈဖကျသူလောကျမဆိုးပါဘူးလို့ ထောကျပွတာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပွောတာထကျ ငါ တောငျးပနျပါတယျ။ ငါ့အမှားပါလို့ ဝနျခံလိုကျတာက အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ အပွဈကို ဝနျခံတာက နောကျဆကျတှဲကိစ်စတှကေို ကာကှယျပွီးသားဖွဈစပေါတယျ။
Previous: ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့မှု၏ လက္ခဏာများ
Next: သ၀န်တိုစိတ်ကို လျှော့ချပြီး သဘောထားကြီးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၇)ခု